Machadka Heritage Oo Soo Bandhigay Warbixinada Ay Uruuriyeen Sanadkii 2014 – Radio Muqdisho
Machadka Heritage Oo Soo Bandhigay Warbixinada Ay Uruuriyeen Sanadkii 2014
Cilmibaarista uu machadku ka sameeyey baahinta xukunka ayaa ugu cad-caddayd shaqooyinkeenna 2014-ka. Cilmibaarayaal ka socda machadka ayaa daraasad ka sameeyey 5 magaalo, taas oo qeyb ka ahayd mashruuca Wadahadalka Qaran ee Federaalka. Inkastoo dastuurka ay ku qoran tahay federaalku, haddana Soomaaliya si dhab ah loogama fahamsana; taasina waxa ay keentay xaalad abuurtay jawi khilaaf oo ka dhex jira beelaha iyo degaanada Soomaaliyeed. Sidaas darteed ayaan cilmibaarista federaalka uga hawl-galnay annaga oo ka duulayna dareenka ah, kor u qaadista fahamka federaalka ee bulshada Soomaaliyeed iyo furidda dood-qaran oo mowduucan ku saabsan, in ay kaalin mug leh ka geysan karaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Intii cilmibaarista aan ku guda-jirneyna waxaan dhidibada u sii aasnay xiriiro shaqo oo macno leh oo aan la dhigannay hay’ado kale oo dalka ku baahsan gaar ahaan jaamacadaha.